KISMAAYO, Soomaaliya - Waxaa magaalada Kismaayo ee xarunta KMG dowlad goboleedka Jubbaland ka furmey shalay shirka qaran ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya kaas oo muddo Afar cesho ah socon doona.
Shirkan oo ay ka qeybgalayaan mas'uuliyiin heer Federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha Gudiga Dastuurka ee labada Golle ee Baarlamaanka ayaa looga hadlayaa sidii shacabka ay uga talo dhiiban lahaayeen dib-u eegista Dastuurka.
Khudbad uu ka jeediyay Shirka Hay'adaha Dastuurka, ayuu Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe ku sheegay in Dastuurka uu noqday mashruuc aan dhamaanin, oo qolobo meel u qaadato, taasoo keentay inuu khilaaf ka dhamaan waayo dalka.
Axmed Madoobe ayaa xusay in inta dastuurka uu qabyada yahay ay adag thay in la gaaro dowladnimada Soomaaliya, oo wax lagu heshiiyo, islamarkaana laga baxa khilaafyada siyaasadeed ee dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada.
HALKAN KA DAAWO KHUDBADDA AXMED MADOOBE: